[Review] Kem ủ tóc Loreal có tốt không? Loại nào tốt nhất? | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Kem ủ tóc Loreal có tốt không? Loại nào tốt nhất? | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Kem ủ tóc Loreal có tốt không? Loại nào tốt nhất? | Muasalebang in Muasalebang
Kwabesifazane abangakwazi ukunakekela izinwele zabo noma ngokuvamile isitayela, ukugoqa nokuqondisa izinwele zabo, ukusetshenziswa kwamakhemikhali kulula kakhulu ukwenza izinwele zonakaliswe futhi ziphukile. Izinwele ze-cream ezifakiwe ingenye yezinqumo eziphezulu ukusiza ukulungisa izinwele ezilimele. Phakathi lapho I-Loreal hair cream othenjwayo futhi waziswa abesifazane abaningi. Ngakho-ke liyini iqiniso, lesi sihloko sizobukeza ngokuningiliziwe mayelana nalesi sihloko esithandwayo se-hair cream line.
1 Ulwazi mayelana nokunakekelwa kwezinwele brand Loreal
2 I-Loreal hair conditioner kufanele ithenge?
3 Ukubuyekezwa kwezimonyo zezinwele ze-Loreal 3 ezidume kakhulu namuhla
3.1 3.1 I-L’oreal Paris Elseve I-Extraordinary Oil Ultra Nourishing Cream
3.2 3.2 I-Loreal Paris Elseve Fall Resist 3X ukhilimu wokwelapha ukulahlekelwa izinwele
3.3 3.3 Ingqikithi Yokulungisa Izinwele I-Loreal Paris 5. I-conditioner yokulungisa izinwele
4 Ungawusebenzisa kanjani ukhilimu wezinwele we-Loreal ngempumelelo nangokuphepha
4.1 Isinyathelo 1: Geza izinwele zakho kahle
4.2 Isinyathelo sesi-2: Faka i-Loreal hair conditioner
4.3 Isinyathelo sesi-3: Fudumeza izinwele zakho
4.4 Isinyathelo sesi-4: Hlanza ngamanzi apholile
4.5 Isinyathelo sesi-5: Yomisa izinwele zakho
Ulwazi mayelana nokunakekelwa kwezinwele brand Loreal
I-Loreal wumkhiqizo wezimonyo ovela eFrance, wethulwa ngokusemthethweni ngo-1909 ngunjiniyela waseFrance. Umkhiqizo wokuqala ovela kulo mkhiqizo udayi wezinwele. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwe-100 yokusebenza kuze kube manje, i-Loreal ikhula kakhulu futhi iba enye yezinkampani zezimonyo ezihamba phambili.
Lo mkhiqizo unamakhulu amagatsha emhlabeni wonke, ahlinzeka ngemigqa ebanzi yezimonyo. Imigqa yomkhiqizo kusukela ekunakekelweni kwesikhumba, izimonyo kuya ekunakekelweni kwezinwele zihlala zithandwa amakholwa obuhle.
I-Loreal brand idume ngezimonyo nokunakekelwa kwezinwele
EVietnam, uLoreal wavula igatsha ngo-2007, wakha imakethe engaba khona. Kuze kube manje, lolu hlobo lubambe isikhundla esiqinile ezinhliziyweni zabathengi baseVietnam. Ikakhulukazi, umugqa wokulungisa izinwele we-Loreal uyathandwa futhi waziswa abantu abaningi uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo. I-Loreal yethule izinhlobonhlobo zemikhiqizo yokwelapha izinwele ezifanele izinhlobo ezahlukene zezinwele.
I-Loreal hair conditioner kufanele ithenge?
Ukuhlola umphumela, ukuphumelela kwe-Loreal hair incubation, sizobheka izithako ezibalulekile eziqukethwe kumkhiqizo. I-Loreal Hair Conditioner Kunezinhlobo eziningi ezahlukene, ngayinye inezithako zayo kanye nokusetshenziswa kwayo. Uhlu lwe-conditioner ye-Loreal luvame ukuqukatha utshwala “Utshwala”, lesi sithako sidlala indima ebalulekile ekugcineni amanzi, okusiza ukugcina izinwele zithambile futhi zibushelelezi.
Ngaphandle kwalokho, kukhona ubukhona beCement Ceramide – ukusungulwa okukhethekile kweLoreal. Lesi sithako singangena ngokushesha ezinweleni, silungise izindawo ezilimele, senze izinwele zibe namandla futhi ziqine. Izithako zomugqa we-Loreal incubation cream zihlale ziqinisekisa ukuphepha kwezinwele nekhanda lomsebenzisi.
I-Loreal Incubation Cream iletha izinwele ezicwebezelayo, ezinempilo
Ngeke kudingeke ukuthi uchithe isikhathi esiningi nemali uma kufanele uye ezindaweni zezinwele, ngoba ungakwazi ukunakekela izinwele zakho ekhaya nge-Loreal hair care line. Ukhilimu wokufukamela uqukethe izithako eziphephile, iphunga elimnandi, uma usetshenziswa, uzonikeza abasebenzisi umuzwa wokondliwa kusukela empandeni kuya kwesinye.
Ukhilimu we-incubation ovela ku-Loreal brand unemikhiqizo eminingi ehlukene, efanelekayo uhlobo ngalunye lwezinwele. Ngezinwele ezilimele njengezomile, iziphetho ezihlukanisiwe, eziphukile … usebenzisa i-Loreal incubation cream kuzosiza izinwele zilulame ngokushesha. Ngezinwele ezidayiwe, ukhilimu we-incubation uzosiza izinwele zibe nombala ojwayelekile kanye nokukhanya okuhle kakhulu.
Izinhlobo zezinwele zomile, zilukhuni ukugoqa, ngemuva kwesikhathi sokusebenzisa ukhilimu wezinwele ze-Loreal, izinwele ziba bushelelezi futhi zigoqeke kalula. Ngokuvamile, i-Loreal iphumelela kakhulu, isiza izinwele ukuba zondliwe ngaphakathi, zisize izinwele zikhule ngokushesha. Ngesikhathi esifanayo, intengo yemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele nayo iyathengeka kakhulu.
Kodwa-ke, umugqa wekhilimu wezinwele ubuye ube nephuzu elincane lokususa mayelana nomklamo wokupakisha. Imigqa yekhilimu yalo mkhiqizo ngokuvamile iklanyelwe ngendlela yembiza, ngaphandle kwe-dispenser ye-ayisikhilimu. Ngakho-ke, uma usebenzisa, kungenzeka ukuthi uthole ukhilimu omningi, owumoshayo futhi ongathandeki ukuwusebenzisa.
Bhekisela: [Review] I-Fino Shiseido Hair Conditioner enemininingwane eminingi futhi inhloso
Ukubuyekezwa kwezimonyo zezinwele ze-Loreal 3 ezidume kakhulu namuhla
I-Loreal ihluke kakhulu ekwakhiweni nasekusetshenzisweni kwemikhiqizo yokhilimu wezinwele, ngakho-ke abesifazane abaningi bayadideka ukuthi iyiphi okufanele bayikhethele izinwele zabo. Ukubuyekezwa kwe-Loreal hair conditioner Ngezansi kuzokusiza ukuthi uthole kalula imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele efanele.
3.1 I-L’oreal Paris Elseve I-Extraordinary Oil Ultra Nourishing Cream
I-Loreal Elseve Extraordinary Oil Ultra Nourishing hair cream enokukhishwa kwamafutha ezimbali emvelo angu-6 kanye nenani elikhulu lamafutha e-cottonseed nemisoco. Lezi zithako zingena zijule ezinweleni, zigcine izinwele zibushelelezi, zithambile futhi ziqinile. Umkhiqizo usiza ukuthambisa izinwele ukuze unciphise ukoma, ukuqina kanye ne-frizz. Ikakhulukazi, isimo sokulahlekelwa izinwele sizothuthukiswa ngemva kwesikhathi sokusetshenziswa.
Ukhilimu wokufukamela unephunga elipholile elivela ezimbalini zemvelo, ugcina iphunga ngemva kokukhishwa ukuze udale umuzwa wokuphumula nokunethezeka lapho usetshenziswa. Izithako zemvelo, ezinobuhle azicasuli isikhumba sekhanda. Lona umugqa womkhiqizo ojulile wazo zonke izinhlobo zezinwele, kodwa uphumelela kakhulu ezinweleni ezilimele, ezomile, eziqinile.
Intengo yesithenjwa: 110,000 VND.
3.2 I-Loreal Paris Elseve Fall Resist 3X ukhilimu wokwelapha ukulahlekelwa izinwele
U-Loreal uyakuqonda ukuphazamiseka nokukhathazeka kwabesifazane lapho izinwele zabo ziqothuka, ngakho-ke baye bethula umugqa womkhiqizo we-Loreal Paris Elseve Fall Resist 3X. Umkhiqizo uyisixazululo esiphelele sabesifazane abanezinkinga ngezinwele ezibuthakathaka, ezilimele kalula futhi eziphukile.
Umkhiqizo uqukethe i-ARGININE essence – i-amino acid ebalulekile ehlinzeka ngohlu oluphelele lwezakhi ezibalulekile zezinwele, zondla izinwele futhi zibuyisele ngempumelelo umonakalo. I-Loreal Fall Repair I-3X ukhilimu wokuvimbela ukulahlekelwa izinwele ivelele ngokusetshenziswa kwe-3 okulandelayo: Yondla izinwele kusuka ngaphakathi nangaphandle, kusukela empandeni kuya phezulu; Ibuyisela izindawo zezinwele kuze kube semikhawulweni, ilungisa kabusha imicu yezinwele; Ishukumisa isikhumba sekhanda ukuthi sikhule izinwele ezintsha, ezinempilo.
Ngaphezu kokunciphisa ukusetshenziswa kwamakhemikhali kanye nemiphumela yokushisa elimaza izinwele, ukusebenzisa i-Loreal Paris Elseve Fall Resist 3X kuzosiza ukubuyisela ukwakheka kwezinwele, ukudala izinwele ezinhle, ezinempilo futhi ezinomsoco.
Ufuna ulwazi olwengeziwe: [Review] Ingabe i-TRESemme Keratin Smooth hair cream muhle?
3.3 Ingqikithi Yokulungisa Izinwele I-Loreal Paris 5. I-conditioner yokulungisa izinwele
Kulabo kini abavame ukusebenza endaweni ene-air-conditioning noma abasebenzisa amakhemikhali ezinweleni zenu, ukusebenzisa umugqa womkhiqizo we-Loreal’s Paris Elseve Total Repair 5 Repairing Mask Mask kuyisixazululo. I-Loreal Paris Elseve Total Repair 5 Repairing Mask 200ml iwumugqa womkhiqizo wokubuyisela esimweni. Futhi kufanelekile ezomile, ezilimele, iziphetho ezihlukanisiwe nezinwele eziphukayo.
I-Loreal Paris Total Repair 5 Mask inefomula yokuphumelela engagcini nje ngokuqinisa izinwele, kodwa futhi ithambisa ngaphakathi ngaphakathi. Kulabo kini abavame ukudaya izinwele zenu, lona umugqa womkhiqizo wenu. Ukhilimu wokunakekelwa kwezinwele we-Loreal wezinwele ezidayiwe usiza ukugcina umbala wedayi uzinzile futhi awufihli ngemuva kokufukamela. Izinwele zakho ziyohlale zibushelelezi, zicwebezela, futhi zicekele phansi umonakalo odalwe amakhemikhali.
Isithako esisebenzayo esiguquguqukayo I-Cement Ceramide ingena kalula ezindaweni zezinwele ezibuthakathaka, ithuthukisa ukunwebeka, ivimbele ukuhlukana, ithambisa izinwele zezinwele ezicwebezelayo, ezigobile. Iphunga lithambile futhi lihlala ezinweleni isikhathi eside, lidala umuzwa wokuphumula kumsebenzisi. Ukuthungwa okukhilimu akunasigaxa noma ukujiya, abasebenzisi bangathatha kalula ukhilimu bawuhlikihle ezinweleni. Lo mkhiqizo unikeza imiphumela esheshayo ngemva kwenyanga eyodwa kuphela yokusetshenziswa.
Ungawusebenzisa kanjani ukhilimu wezinwele we-Loreal ngempumelelo nangokuphepha
Ukuze usebenzise kanjani I-Loreal creme ngokushesha, ngempumelelo, lapho ufukamela izinwele zakho, kufanele ulandele lezi zinyathelo.
Isinyathelo 1: Geza izinwele zakho kahle
Isinyathelo sokugeza izinwele zakho sibaluleke kakhulu, ngoba uma ungenzi lesi sinyathelo, izinwele zakho zizoba namafutha, zinamathele, izakhi ezivela kukhilimu azikwazi ukungena ngokujulile ezinweleni futhi izinwele zingase zibe namafutha emva kokufakwa kwe-incubation. Ngaphambi kokugeza izinwele zakho, kufanele usebenzise ikamu ukuze ugcine izinwele zakho zingahlangani, bese ugeza izinwele zakho kahle futhi usebenzise ithawula elithambile likakotini ukuze umunce amanzi.
Isinyathelo sesi-2: Faka i-Loreal hair conditioner
Hlukanisa izinwele zakho zibe izingxenye ezingu-4, okwenza kube lula ukusebenzisa ukhilimu ngaphandle kokulahlekelwa noma iyiphi ingxenye. Gcoba ukhilimu we-Loreal kusuka empandeni kuya esihlokweni ezingxenyeni, sebenzisa kahle izinwele ezilimele kanye nokuphela kwezinwele ukuze izakhi zingene ngokujulile ezinweleni. Gcoba ngobumnene isikhumba sekhanda ukuze ukhilimu udonswe ngokulinganayo kuwo wonke izimpande zezinwele kanye nekhanda. Qaphela ukuthatha inani elanele lekhilimu, gwema ukusebenzisa ubukhulu obukhulu futhi nge-scalp yamafutha, gwema ukuyifaka ku-hairline.
Isinyathelo sesi-3: Fudumeza izinwele zakho
Ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, emva kokusebenzisa ukhilimu, kufanele ubophe izinwele zonke ngethawula elishisayo bese ufaka imizuzu engu-10-20. Ukushisa kuzokwenza i-cuticle yezinwele ikhule, izakhi zingangena kalula ngaphakathi ngaphakathi. Ngokuya ngempilo yezinwele, kunezikhathi ezihlukene zokufukamela, noma kunjalo, akufanele kube ngaphezu kwemizuzu engu-20, izinwele zingaba namafutha futhi zinamathele.
Isinyathelo sesi-4: Hlanza ngamanzi apholile
Ngemva kokufukamela izinwele zakho isikhathi esifanele, kufanele uzigeze ngamanzi apholile. Ukushisa kwamanzi kusiza ukuvala i-cuticle yezinwele, ukugcina izakhi ku-shaft yezinwele. Akufanele usebenzise noma iyiphi enye i-conditioner ngoba ukhilimu usuvele unomsoco
Isinyathelo sesi-5: Yomisa izinwele zakho
Izinwele emva kokugeza zomisiwe ngethawula elithambile, zingashiywa ukuze zome ngokwemvelo noma zomiswe endaweni epholile. Ngakho-ke ngezinyathelo ezingenhla, usuvele ungumnikazi wezinwele ezibushelelezi, ezicwebezelayo. Kufanele usebenzise i-Loreal incubation cream izikhathi ezi-3 ngesonto, uma umatasa kakhulu unganciphisa isikhathi esingu-1 / ngesonto futhi uyisebenzise njalo futhi ngokuqhubekayo.
Ngeziphakamiso ezingenhla, unolwazi oluwusizo kakhulu lokukhetha umugqa I-Loreal creme ezifanele izinwele zakhe. Ngesikhathi esifanayo, uyazi nolwazi lokunakekela izinwele zakho ekhaya ngokuphumelelayo. Ukuphikelela nje usebenzisa i-Loreal, ngokuqinisekile ngemva kwesikhashana uzobona umehluko ezinweleni zakho, ezithambile, ezithambile futhi ezinamandla.
Xem Thêm Top 8 Serum Vitamin C tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang
Top 5 Sản phẩm Tăng Cân cho bé chậm lớn tốt nhất hiện nay | Muasalebang
9 điểm khác biệt giữa các dòng iPhone 12, Mini, Pro, Pro Max | Muasalebang